AnTuTu dia manambara ny tena mampiavaka ny Meizu 16X | Androidsis
Ny Meizu 16X dia mamakivaky AnTuTu ary manambara ny fiasa manasongadina azy
Taorian'ny fahombiazana azon'ny orinasa sinoa Meizu 16, ny sainam-pireneny roa ankehitriny, fitaovana iray hafa toa ho avy, ary tsy iza izany fa ny Meizu 16X, terminal iray tafaporitsaka teo aloha tao amin'ny Geekbench izay manambara antsipiriany misimisy kokoa noho ny fisehoany vao haingana tao amin'ny tahiry AnTuTu.
Araka ny refy, ny Meizu 16X dia miaraka amin'ny Snapdragon 710, processeur valo-core eo anelanelany misy fampisehoana mahasarika. Ankoatr'izay, naseho koa ny toetra hafa. Mahalalà azy ireo!
Araka ny lazain'i AnTutu, ny Meizu 16X, izay nandeha teo ambanin'ny anarana kaody "m1872", mitantana ny rafitra fiasa Android 8.1 Oreo. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny lafiny famaritana ara-teknika, dia miaraka amina processeur Qualcomm octa-core Snapdragon 710 izay afaka mahatratra hafainganam-pandeha hatramin'ny 2.2 GHz noho ireo coro Kyro 385 roa misy azy ary enina hafa mahatratra 1.7 GHz hafainganam-pandeha. Mazava fa ity farany dia natao handrindra sy hampandeha ireo asa tsy dia mitaky be loatra.
Nasongadina ihany koa, araka ny hitantsika amin'ny sary, fa mitondra Adreno 616 GPU ho mpiara-miasa amin'ilay chipset izy io. Ho fanampin'izany, miaraka amin'ny RAM 6GB, miaraka amin'ny habaka fitahirizana anatiny misy fahaiza-manao 64GB ary miaraka amin'ny efijery FullHD + 2.160 x 1.080 teboka vahaolana. Noho io farany io dia tsy miaraka amina endrika izy amin'ny endriny, toa izany.
Ny angona hafa, navoakan'i Geekbench herinandro vitsivitsy lasa izay, dia manondro fa ny finday dia miaraka amin'ny OS, processeur ary RAM efa voalaza. Izany dia ankoatry ny tsaho sy ny vinavina izay Izy io dia hampiasa mpamaky ny dian-tànana, haitao famantaran-tarehy, fakan-tsary avo lenta ary bateria miaraka amina fanohanana famahanana haingana.
Meizu dia hanolotra ity finday ity amin'ny volana ho avy. Tsy ho ela dia hianarantsika ny momba azy rehetra, manomboka amin'ny fikajiana ara-teknika azy hatramin'ny vidiny sy ny fahafahany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Meizu 16X dia mamakivaky AnTuTu ary manambara ny fiasa manasongadina azy
Nokia 6.1 Plus sy Nokia 5.1 Plus: ny afovoany vaovao an'ny marika